Imithetho yeeMveli kunye neNkcubeko zeMilingo yaseMelika
Isangqa esingcwele soBomi
Ivili lesirya, elivela kwizithethe zamasiko aseMelika , likwabizwa ngokuba yi- Sacred Hoop. Ivili lesigqirha limelela ingqungquthela engcwele yobomi, izikhokelo zalo ezine ezisisiseko, kunye nezinto ezidibeneyo. Ulwalathiso ngalunye lwesondo lunikeza izifundo, umbala, kunye nesiluleko somoya. Iifomethi zezilwanyana zikhonza njengabagcini okanye abameli beekhokelo.
Izilwanyana Abagcini beeMveli zaseMelika zaseMedicine Wheel
Izilwanyana ezine ezivame ukumelelwa kule nxaxheba yi -Bear , i-Buffalo, i-Aagle, ne-Mouse .
Nangona kunjalo, akukho mithetho ekhawulezileyo malunga neziphi izilwanyana ezimelela izikhokelo zeGedyuli . UMichael Samuels, umbhali-mbhali weNdlela yeNtloko , ufundisa ukuba bonke abantu bomthonyama banezilwanyana zomoya ezahlukeneyo kunye neentsingiselo zezikhokelo, basikhuthaza ekukhethweni kwethu.
Olunye uhlobo luyizilwanyana ezingcwele ezikhonza njengabameleli kwi-Wheel of Wheel Lakota. ZiyiTynderbird, Buffalo, Deer kunye ne-Owl. I-Thunderbird yonyulwa ngenxa ye-West direction ngenxa yokumanyaniswa kwayo okunamandla kunye neendudumo kunye neziphepho. Kukhokelo lwaseNyakatho i-Buffalo inikwe imbeko ngenxa yendawo yayo engcwele kunye nesimo. EMpuma i-Black-Tailed Deer yenza ivili libe namandla angabonakaliyo kwaye angcwele. Kwaye eMzantsi, i-Owl Owl isebenza njengomthunywa wevili lesigxina.
Ivili leMida njengesixhobo sokusasaza
Ivili lesigqirha liwuphawu lokulinganisa kunye nokulinganisela. Ngexesha lokwakha ivili, uya kuqalisa ukuqonda ukuba zeziphi iinkalo zobomi bakho abalinganisekanga, kwaye apho ingqalelo yakho ilahlekile kwaye idinga ukugxila.
Ukuqhubeka usebenza nevili emva kokuba wakha. Hlala ngesondo lakho ngokucamngca. Vumela ivili ukuba likuncede ekufumaneni imbonakalo emitsha neyohlukeneyo.
Ivili lesigqirha limelela ezininzi iintshukumo zobomi. Isangqa simele umjikelezo ongapheliyo (ukuzalwa, ukufa, ukuzalwa kwakhona).
Ilitye ngalinye okanye ukubeka indawo ngaphakathi kwevili lijolise kwizinto ezahlukeneyo zokuphila.
Ivili lomuthi lentshukumo lingenziwa ngokusebenzisa iifestile ezifana neekristal, arrowheads, seashells, iintsiba, ubomvu / amathambo, kunye njalo. Thatha ixesha lokucinga ngento nganye yobomi bakho (ubomi, intsapho, ubudlelwane, injongo yobomi, uluntu, iimali, impilo, njl) njengoko ubeka izinto kwisangqa.
Iivili eziLula kunye neeNtsholongwane
Ivili lomuthi linokwakhiwa ngaphandle kokusetyenziswa kwezinto, vele udwebe isangqa sakho ngeepensele ezinemibala kunye nephepha. Ukuba unamagumbi ngaphandle kwevili elikhulu lemoto kwaye ufike phambili kwiprojekthi. Ukuba unokwenza ube lunkulu ngokwaneleyo ukuba uhlale ngaphakathi kwezikhala phakathi kweeteksi zesondo emva kokuba ukwakhile konke okulungileyo!
I-Wheel Elements kunye nezikhokelo
Ezine Izinto :
Umlambo, Amanzi, Umlilo, uMhlaba
EmaNtla, eMpuma, eMzantsi, naseNtshona
Umntla, uMntla, uMzantsi, iNtshona, iZiko (Intliziyo)
EmaNtla, eMntla, eMzantsi, eWest, Sky, Earth
Izikhokelo ezisixhenxe :
EmaNtla, eMpuma, eMzantsi, eWestern, uYise Sky, uMama womhlaba, iZiko (Uzimeleyo)
Ukuphulaphula Iingcamango Zakho Ezikhokelayo
Iziqu zezilwanyana: Amakati njengezithunywa Zomoya
I-Meridians Iindlela eziMandla ngaphakathi kwiBhunga
Malunga ne Energetics
Ulwahlulo lweNtshontsha yeSom Movie: amaNazi
I-Randolph College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Usebenzisa nini "iSmimasen" njenge "Ndiyaxolisa"? Yaye usebenzisa nini "iGomasai"?
I-TPMS Inzuzo kunye neNzuzo
I-Eastern North Neolithic
'Thanda Ummelwane Wakho Njengawe' Ivesi leBhayibhile
Uthini U-Allahu Akbar?
Imbali yePatato - Ubungqina bemivubukulo yeePatati zasekhaya